कोरोनाबाट वरिष्ठ सर्जन मुडभरीको निधन - Everest Dainik - News from Nepal
कोरोनाबाट वरिष्ठ सर्जन मुडभरीको निधन
काठमाडौं : ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरका संस्थापक एवं वरिष्ठ सर्जन डा. ध्रुव शर्मा मुडभरीको निधन भएको छ । उनको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको हो ।
शर्माको ७७ वर्षको उमेर शनिबार अपराहृन ओम अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । उनी १५ दिनयता संक्रमणसँग जुधिरहेका थिए । अस्पतालका अनुसार उनलाई कडा निमोनिया भएको थियो र आईसीयूमा राखेर उपचार गरिएको थियो ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको पालामा शाही चिकित्सकको भूमिका निभाएका उनले वीर अस्पतालमा निर्देशकका रुपमा समेत काम गरेका थिए ।
ट्याग्स: डा. ध्रुव शर्मा मुडभरी